Junior Win (ဂျူနီယာဝင်း) : 2013
ပရိုမီးသီးရစ်အတွက် တာဝန်အသစ် ဂျူနီယာဝင်း
(Junior Win ရေးသော Walking Through The Wonderland – digital စာအုပ်မှ Unbound Prometheus and A New Task for You ကုို ကိုယ်တုိုင်ဘာသာပြန်ထားသည်။)
ဂရိများ၏အဆိုအရ ဒဏ္ဍာရီနတ်ဘုရား ဇီးယုဇ် (Zeus) နတ်မင်းကြီးကိုဆန့်ကျင်ပြီး Prometheus (ပရိုမီးသီးရစ်) က လူသားများအတွက် မီး ကိုပေးခဲ့သည်။ ထိုအဖြစ်ကြောင့် ပရိုမီးသီးရစ်သည် ဇီးယုဇ်နတ်မင်းကြီး၏ပြစ်ဒဏ်ကိုခံခဲ့ရသည်။ ပရိုမီးသီးရစ်ကို ကျောက်တုံးမှာချည်နှောင် ထားကာ သိမ်းငှက် (သို့မဟုတ်) လင်းတကြီးက သူ့ကိုအဆက်မပြတ် ထိုးဆိတ်စေလေသည်။ ထိုအကြောင်းကို ကျွန်မအဘွားဆီက ပုံပြင် တစ်ပုဒ်သဖွယ် နားထောင်ခဲ့ရသည်။ မေမေကြီးကပြောထားတော့ အဲသည်မီးဆိုတဲ့အရာဟာ တကယ့်မီးစစ်စစ်ကိုပြောတာထက်’ အသိ ပညာ’ ကို ဆိုလိုပါသတဲ့။
လူသားများသည် မီးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်ကစလို့ ကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်သွားသည်။ အရင်က သားစိမ်းငါးစိမ်းများကိုသာ စားတတ်ရာ ကနေ မီးကိုအသုံးပြုကာ ချက်ပြုတ်စားတတ်၍ အရသာရှိမှန်းသိလာသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် အသိပညာဥာဏ်အဆင့်အတန်းမြင့်မားလာကာ လူနေမူဘဝများ တိုးတက်လာသည်။ အိမ်တွေဆောက်ကာ နေထိုင်ကြ၊ အဝတ်အစားများချုပ်လုပ်ကြကာ လူသားများအတွက် အကျိုး ရှိမည့်လက်နက်များကိုပင် ကာကွယ်ဖို့အတွက် ပြုလုပ်ဖန်တီးတတ်လာသည်။ သည်တော့ လူသားများ၏ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးခဲ့ သော ပရိုမီးသီးရပ်စ်ကို ကျေးဇူးတင်ရမည်။
ပရိမီးသီးရပ်စ်ဆိုတာ သူ့ဘဝကိုစတေး၍ လူသားများအတွက် မီးကိုပေးခဲ့သူ၊ သူ့ကြောင့်လူသားများ မီးဆိုတဲ့အသိပညာကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့။ လူသားများဟာ ကမ္ဘာကြီးထဲက အသစ်အဆန်းဟူသမျှကို ရှာဖွေတွေ့ရှိလာခဲ့ကြ။ မယုံနိုင်စရာများကို တီထွင်ဆန်းသစ်လာခဲ့ကြ။ သူ့ကြောင့် လူသားများတောထဲက တိရိစ္ဆာန်တွေလို မနေထိုင်ရတော့ဘဲ စိတ်ချလုံခြုံစွာ အန္တရာယ်ကင်းကင်နေထိုင်ခဲ့ကြရ။
မီးကိုအသုံးချတတ်လာတော့ လက်နက်တွေတီထွင်တိုးတက်လာကြတော့ လူသားတွေကမုဆိုးတွေဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ သူတုို့က တောထဲ ကတိရိစ္ဆာန်များကို သတ်ဖြတ်စားသောက်ရာမှာ ပို၍တိုးပွားလာသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် အတိုင်းအဆမရှိသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြရာမှာ တချို့သော တိရိစ္ဆာန်များမှာ မျိုးတုန်းပျောက်ကွယ်သွားသည်အထိ ကြုံကြရသည်။ ဥပမာ ဒိုဒိုငှက်ဆိုတာ ခုခေတ်မှာ မည်သူမျှမသိတော့ပါ။ လူသားများ အစာအဖြစ် သတ်စားလိုက်ကြတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မမြင်တွေ့နိုင်တော့ပါ။ ဒိုဒိုငှက်သည် ပျံလည်း မပျံနိုင်၊လူကို ဒုက္ခမပေးတတ်သော သတ္တဝါ ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် နှင်းကျားသစ်ခေါ် အဖြူနှင့်အနက်ကြား ကျားသစ်မျိုးမှာလည်း အရေခွံရောင်းစားဖို့ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတာ မျိုးတုံးလုနီးပါးဖြစ် သွားသည်။ မြောက်အမေရိကတိုက်ကျွဲများမှာ အမဲလိုက်ခံရတာနှင့် လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်သည်။ အာဖရိကမုဆိုးများက ကြံ့များကို အစွယ်အတွက် သတ်ကြသည်။ ဆိုက်ဗေးရီးယားကျားမျိုးနွယ်များ၏လည်း မျိုးတုံးတော့မည်။ စာပို့ခိုလေးများ သန်းထောင်ချီပြီးရှိခဲ့ရာမှ နောက်ဆုံးလက်ကျန်တစ်ကောင်မှာ ၁၉၁၄ ခုနှစ်က တိရိစ္ဆာန်ရုံမှာ သေဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘာဝ အရင်းအမြစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့က မျိုးတုံးတော့မည့် မျိုးနွယ် ၅ဝဝဝ ကျော်ရှိပြီဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
လူသားများမီးကိုအသုံးချတတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ပိုင်ဆိုင်လာသော အသိပညာ ခွန်အားကြောင့် တဖြည်းဖြည်းလောဘတက်လာပုံဖြစ်လေသည်။ အစားအသောက်အတွက်ဟုဆိုရာကနေ အရေခွံအတွက်၊ ဆေးဖော်ဖို့အတွက် စသည်ဖြင့် မထိန်းချုပ်နိုင်ဖြစ်လာသည်။
လူသားများသည် မီးကို အသုံးချတတ်လာသည်မှစလို့ တိရိစ္ဆာန်များကိုအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးဖြင့် သတ်ဖြတ်လာခဲ့သည့်အပြင် တခြား သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်း တိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာသည်။ လူသားတွေ ကမ္ဘာ့မြေပြင်အောက်ကရေနံကိုတူးဖော်ကာ ကိုယ် ကျိုး အတွက် အသုံးချလာနိုင်ကြသည်။ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာမှာ ရေနံတူးဖော်စက်ရုံများဆောက်လုပ်ကာ စီးပွားရေးလုပ်လာကြသည်။ အကယ်၍ များ ပင်လယ်ထဲမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်စီးရလျှင် ရေနံများပင်လယ်ထဲယိုဖိတ်တော့သည်။ ရေနံတင်သင်္ဘောကြီးများ ပင်လယ် ထဲပေါက်ကွဲလောင်ကျွမ်းလျှင်လည်း ရေနံများပင်လယ်ထဲရောက်သွားသည်။ ထိုအခါ ပင်လယ်နေ ငါးအမျိုးမျိုးနှင့် ပင်လယ်ငှက်ကလေးများ ပျက်စီးရသည်။ ထိုစေးကပ်သော ရေနံစိမ်းများ ငှက်အတောင်များမှာကပ်သွား၍ မပျံနိုင်ပဲသေဆုံးရသည့်သတင်းများကို တစ်ခါတစ်ရံ တွေ့ရသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တုန်းက အလာစကာ Alasaka မှာ ExxonValdez ရေနံယိုဖိတ်မှုသည် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မဟုတ်သော်လည်း လူထု စိတ်ဝင်စားမှု အာရုံစိုက်မှုများ ခံခဲ့ရလေသည်။
ဂျာမန်မှာမွေးသော အမေရိကန်ဖွား ရူပဗေဒပညာရှင် AlbertEinstein သည် သူတီထွင်ခဲ့သော Relativity Theory ကြောင့် နာမည်ကြီးသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သူတီထွင်ခဲ့သော နာမယ်ကျော်ညီမျှခြင်း E=mc2 (E = စွမ်းအင်၊ m = အစိုင်အခဲ၊ c = အလင်း၏အလျင်)သည် အဏုမြူဗုံးတီထွင်မူ၏ အခြေခံသီအိုရီတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအဖြစ်ကြောင့် အိုင်စတိုင်း (Einstein) သည် သမ္မတ ရုို့စဘက် (Rosevelt) ထံသို့ စာတစ်စောင်ရေးသားပေးပို့ကာ သတိပေးခဲ့သည်။ ဒီဗုံးဟာ သင်္ဘောနဲ့သယ်ယူလို့ ဆိပ်ကမ်းမှာပေါက်ကွဲခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲသည် ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာတစ်ခုလုံး အန္တရာယ်ရှိလိမ့်မည်။ လေယျာဉ်ပျံနဲ့ သယ်ယူမည်ဆိုပါကလည်း သည်ဗုံးကို သယ်ယူဖို့အတွက် အလွန်လေး လံပါလိမ့်မည်။’ စသည့် စာသားများပါသော စာတစ်စောင်ကို ရေးသားပေးပို့ခဲ့သည်။ သို့ပါသော်လည်း ထိုအဏုမြူဗုံးသည် ကမ္ဘာကြီးအား ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိ သောအရာတစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိခဲ့သည်။အိုင်စတိုင်း၏စာသည်သမ္မတရို့စဘက် (Rosevelt) ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင် စုမှာ ကိုယ်ပိုင်အဏုမြူဗုံးအစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ် အလျင်အမြန်ဆောင်ရွက်ဖို့ တွန်းအားပေးလိုက်သလိုသာဖြစ်သွားခဲ့ပါသည်။ ထိုအဏုမြူဗုံး ဘယ်လောက်အင်အားကြီးမားပြီး အန္တရာယ်ရှိသည်ဆိုတာကိုတော့ စာဖတ်သူများသိပြီးဖြစ်ပေမည်။
တိရိစ္ဆာန်များ မျိုးတုံးပျက်တုံးပျက်စီးခဲ့ရရုံမက သဘာဝအရင်းအမြစ်များသည် လူများ၏လုပ်ရပ်ကြောင့် သဘာဝချမ်းသာသမျှသည် အ ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသော အခြေအနေများကြုံကြရသည်။ သဘာဝအလျောက် ပျက်စီးဆုံးရုံးသွားရသည်ထက်လူသားများ၏လက်ထဲမှာ အ ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတာက ပိုများပါသည်။ ဒီလိုအဖြစ်တွေအတွက် လူသားများကိုတားမြစ်ဖို့ ဘာမှမတတ်နိုင်ပါ။ သည်တော့ ကျွန်မက အကြံ တစ်ခုရလာသည်။
ပရိုမီးသီးရပ်စ်ကို အကျဉ်းချထားရာကနေပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ကာ လူသားများလက်ထဲကမီးကို ပြန်သိမ်းသွားဖို့ဖြစ်သည်။ ဒါဆိုရင် သဘာဝ ကမ္ဘာကြီးအတွက် အခုထက်ပိုကောင်းသောဘဝများ ပြန်ရနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Posted by Junior Win at 11:19 PM No comments:
ခံစားမိတဲ့ အနုပညာ ဂျူနီယာဝင်း
အော်စကာဝိုင်း (Oscar Wilde) သည် ၁၈၉၅ မေလမှစ၍ ၂ နှစ်တိုင် အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ်ကျခဲ့ရသည်။ ထိုအတောအတွင်း သူ့ခံစားချက်များကို ရေးသားထားသော De Profoundis ဆောင်းပါးရှည်သည် ၁၉ဝ၅ ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိခဲ့သည်။ ယခုဘာသာပြန်ထား သည်မှာ နိဒါန်းမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် စာရေးဆရာဖြစ်ခြင်းကြောင့် သူ၏ ခံစားချက်များကို စာဖွဲ့၍ မကုန်ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ Wilde တစ်ယောက် ၁၈၉၅ ခုနှစ် အကျဉ်းကျစဉ်မှာ သူသည် စာပေ ပညာရှင်တစ်ဦးအနေနှင့် ထိပ်ဆုံးရောက်နေချိန်ဖြစ်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်း မှာလည်း အချစ်တော် ဖြစ်နေချိန် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် စကားလုံးလှလှ တီထွင်ရေးသားမှုမှာလည်း ဆရာတစ်ဆူ ဖြစ်နေသည်။ အကျဉ်းထောင်ထဲတွင် လူ့ကျက်သရေဟူသမျှ ခွာချခဲ့ရကာ ကာလကြာရှည်စွာ စာရေးခွင့်မရရှိခဲ့ချေ။ သူဦးစွာ စာရွက်နှင့် ရေးစရာ ရလာချိန် မှာတော့ သူ့မိတ်ဆွေ Douglas ထံသို့ ‘’ခင်ဗျားရဲ့နှလုံးသားထဲကို ခါးသီးစရာတွေ ပစ်သွင်းလိုက်တာ မဟုတ်ရပါဘူး။ ကျွန်တော့် နှလုံးသားထဲကနေ ဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်’’ဟု ရေးသားခဲ့ပါသည်။
De Profoundis ထဲက ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရသော စာသားများသည် ရယ်သွမ်းသွေးဖွယ်ဖြစ်လာရာမှ ငိုချင်စရာဖြစ်ရသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ရှေ့က သူရေးခဲ့သော အရေးအသားများဖြင့် ထိုးနှက် လိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်ရသည်။
‘’မငိုဘဲနဲ့နေတဲ့ အကျဉ်းထဲက နေ့တစ်ရက်ဟာ သူ့အသည်း နှလုံးက မာကျောနေလို့ဖြစ်တယ်။ သူပျော်နေလို့ မဟုတ်ဘူး’’
ထိုစာအုပ်သည် အနှိမ်ခံ၊ သစ္စာဖောက်ခံ၊ ဂုဏ်ကျက်သရေ ညှိးနွမ်းအောင်လုပ်ခံရသူတိုင်း၏ ရင်ကို ထိခတ်လိုက်သော သံစဉ်များ ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉ ရာစု၏ စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်ကို ညဏ်အမြော်အမြင်ဖြင့် စာကြီးပေကြီး ခေတ်ကို ကိုင်လှုပ်လိုက်သော စာအုပ်တစ်အုပ် လည်း ဖြစ်ပါသည်။
Wilde အကျဉ်းကျခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောစရာများ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ သူ့ဘဝကို အမည်းရောင်စွန်းထင်းခဲ့သော်လည်း အမှန်တကယ် သူကျူးလွန်ခဲ့လေသလား။ သို့တည်းမဟုတ် အသရေဖျက်ခံခဲ့ရသည်လား ဆိုတာကတော့ သူမှတစ်ပါး မသိပါချေ။
သူသည် ထောင်တွင်းစာများကို နောင်တချပြီး ရေးခဲ့သည်လား၊ နာကျည်းပြီး ရေးသားခဲ့တာလားဆိုတာကိုတော့…………….
‘’ကျွန်တော့်ရဲ့နေရာဟာ အမှန်တော့ပြင်သစ်စာရေးဆရာကြီးတွေ ရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာ ဖြစ်ရမှာပေါ့။ အဲဒါမျိုးဆို အကောင်းဆုံးပေါ့။ ကျွန်တော့်မှာ စောဒကတတ်ဖုို့ ဆန္ဒမရှိပါဘူး။ သင်ခန်းစာရတဲ့နေရာတွေထဲမှာ ထောင်ထဲမှာရတဲ့ သင်ခန်းစာကတော့ အရာရာတိုင်းဟာ ဒါပဲ၊ နောက်လည်းဒါပဲဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်တော့်မှာ အလယ်ခေတ်က ဘုရားသခင် ကယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အနူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ် ဆိုတာကိုရော၊ သမိုင်းပုံပြင်တွေထဲက ပညာပေးစာသားတွေကိုရော ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ခဲ့တဲ့ ခံစားချက်မျိုးရှိခဲ့ပါတယ်လို့ မပြောဝံ့ပါဘူးဗျာ။
အဲဒီလို ယုံကြည်ခဲ့တာ မနှစ်က ဒီထဲမရောက်ခင်အထိပါပဲလို့ ဆိုပါတော့။ ဘဝရဲ့မြစ်တစ်စင်းဟာ ကျွန်တော်နဲ့ ဟိုးဝေးကွာလှတဲ့ ရက်စွဲတွေ ကြားထဲမှာ စီးဆင်းနေပါတယ်။ ကြည့်စမ်းပါဦး ဘယ်လောက်တောင်များ အကျိုးမရှိ ကုန်လွန်ခဲ့ရတဲ့ပမာဏ။ ဒါပေမဲ့ ဒါကို ကျွန် တော်က ဒီလိုယူဆတယ်။ ကျွန်တော်က မနေ့က အကြောင်းကို မပြောဘူး။ ဒီနေ့ကိုပဲ ပြောမယ့်။ ခံစားမှု ဝေဒနာဆိုတာ သိပ်ကို ရှည်လျား လိုက်တဲ့ အရာတစ်ခု။ ဒါကို ရာသီဥတုနဲ့လည်း ပိုင်းခြားလို့မရ။ ဒါကို သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ တစ်ပတ်ပြန်လည်မှုတွေနဲ့သာ မှတ်တမ်းတင်ထား လို့ ရနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တုို့အတွက် အချိန်ဆိုတာ တိုးတက်မှုမရှိတဲ့ အရာတစ်ခု။ သူက လည်ပတ်နေတယ်။ သူက နာကြင်ခြင်းဆိုတဲ့ ဗဟို ချက်မှာ လည်ပတ်နေတဲ့စက်ဝိုင်း။ ဘယ်တော့မှ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ ပုံစံခွက်ထဲမှာ ဘယ်တော့မှ မလှုပ်ရှား မရွေ့လျားစွာနဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့ အရာ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တုို့က စားတယ်၊ သောက်တယ်၊ လဲလျောင်းတယ်၊ ဘုရားဝတ်ပြုဆုတောင်းတယ်၊ ဒူးတုပ်ထိုင်ပြီးတော့ ဆုတောင်း တယ်။ ဒါတွေက သံမဏိလို မာကျောတဲ့ ပုဒ်မတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ လည်ပတ်မှု။ ဒီလိုဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ နေ့ရက်တွေမှာ မိနစ်တိုင်း ကို ညီအစ်ကိုလိုပေါင်းဖက်လို့ အချိန်တိုင်းကို အသေးစိတ်မှတ်သားလို့ ဘယ်တော့မှ လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့ နေ့ရက်တွေကို ရေတွက်လို့။ သူ့ရဲ့ အနှစ်သာရတည်ရှိခြင်းက ဘာလဲဆိုတော့ အမြဲတမ်းရပ်တန့်နေတဲ့ ပြောင်းလဲမှု။ ကောက်ရိတ်သိမ်းပွဲဆိုတဲ့ ကောက်ပဲသီးနှံရာသီတွေ၊ ကောက် ကွေးလာတဲ့ သီးနှံပင်ရဲ့ အကိုင်းလေးတွေ ရိတ်သိမ်းချိန် ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း စပျစ်သီးတွေမှည့်လို့ အသီးတွေခူးဆွတ်ရတဲ့ကာလ၊ အသီးအနှံ ပင်တွေဆီကနေ မှည့်ရင့်လို့ မြက်ခင်းပေါ်ကိုြွေကကျတဲ့အခါ ဒါတွေကို ကျွန်တော်တုို့ ဘာဆိုဘာမှမသိ၊ သိလည်း မသိနိုင်တဲ့အဖြစ်။
ကျွန်တော်တုို့အတွက် ရာသီက တစ်ခုပဲရှိတယ်။ ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းတဲ့။ ဝမ်းနည်းမှုဆိုတဲ့ရာသီ။ တစ်ခုတည်းသော လမင်းကြီးနဲ့ တစ်ခုတည်းသော နေမင်းကြီးက ကျွန်တော်တုို့ဆီက ဖယ်ခွာသွားပြီ။ အပြင်မှာတော့ နေ့ရက်တွေဟာ အပြာရောင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ရွှေရောင် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ သံမဏိတိုင်တွေမှန်သားပြင်တွေ ကြားက ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ အလင်းရောင်ဖျဖျ မီးခိုးရောင် ညိုမည်းမည်း ညစ်နွမ်းနွမ်း ကြားထဲကို ပုန်းလှျိုးကွယ်လှျိုး ဝင်လာတဲ့ အလင်းရောင်။ အဲဒါသည် သူတစ်ယောက်၏ အခန်းထဲမှာ အမြဲရှိနေတဲ့ ဆည်းဆာ။ ပြီးတော့ သူတစ်ယောက်၏ အသည်းနှလုံးထဲမှာ အမြဲရှိနေတဲ့အလင်းရောင်။ အဲဒီအတွေးစက်လုံးထဲမှာ၊ အဲဒီအချိန်၏ စက်လုံးဆိုတာထက် လည်း မလျော့တဲ့၊ ဘယ်တော့မှလည်း မလှုပ်ရှားတဲ့ အတွေးတွေသာရှိတယ်။ အရာရာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေ ကြာသွားလို့ ဒါတွေကို ကိုယ့် ဘာသာကိုယ် မေ့လျော့သွားမယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ မေ့ဖျောက်နိုင်မယ်ဆိုတာ အခုတော့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ တကယ် ဖြစ်လာပြီ။ မနက်ဖြန်ကျရင်လည်း အဲသည်လို ဆက်ဖြစ်ဦးမှာ။ ကျွန်တော်ဘာလို့ရေးရသလဲဆိုတာကို နားလည်လာမှာပါ။
တစ်ပတ်လောက်အကြာမှာ ဒီနေရာကို ပြောင်းခဲ့ရတယ်။ ၃ လလောက်အကြာမှာ ကျွန်တော့် အမေဆုံးတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ကို ဘယ် လောက်ချစ်တယ်။ ဘယ်လောက်ဂုဏ်ယူတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ သိမှာမဟုတ်ဘူး။ အမေသေဆုံးခြင်းဟာ ကျွန်တော့်ကို ပူပြင်းလောင်မြိုက် သွားစေပါတယ်။ ဒါကို စကားလုံးအက္ခရာတွေရဲ့ ဘုရင်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တင်စားခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ဘယ်လိုစကားလုံးတွေနဲ့ ကျွန်တော့် ရဲ့ ပူဆွေးခြင်းနှင့် ရှက်ခြင်းဆိုတဲ့ အရာကို ဖော်ပြစရာ စကားလုံးမရှိဖြစ်သွားစေတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အနုပညာသမားဆိုတဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ထဲမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှု၊ လေးလံမှုကို ထိရောက်တဲ့ စကားလုံး ရှာမတွေ့ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိတဲ့ ဝမ်း နည်းမှုကို ဖော်ပြတဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ တော်ဝင်စာသားများနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဂီတသံစဉ်လည်း ရှာမတွေ့တော့ဘူး။ ကျွန်တော့် မိခင်နဲ့ ဖခင် တုို့ဟာ ကျွန်တော့်ကို မြင့်မြတ်သော၊ ဂုဏ်ရှိသောဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်များနဲ့ ပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အမည်၊ စာကြီးပေကြီး၊ အနုပညာ၊ သုတေသနပညာ၊ သိပ္ပံပညာဆန်ဆန်သာမက ကျွန်တော့် တိုင်းပြည်ရဲ့ သမိုင်းမှာပါ တွင်လောက်စေတဲ့ အမည်မျိုးကို ပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် ဟာ သည်အမည်ကိုဖြင့် အရှက်ရစေခဲ့ပြီ။ ကျွန်တော်ဟာ နိမ့်ကျတဲ့လူတမ်းစားတွေ အလယ်မှာ ပိုပြီးနိမ့်ကျအောင် လုပ်ခဲ့မိပြီ။ ဒီအမည်ကိုဖြင့် ကျွန်တော်ကပင် နိမ့်ကျအောင် ဆွဲချပစ်ခဲ့မိပြီ။ ဒီနာမည်ကို ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းအောင်၊ ပြီးတော့ သူတုို့လက်ထဲမှာ ယုတ်မာသထက် ယုတ်မာ အောင်၊ ရူးသွပ်သွားအောင် ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့မိပြီ။ ကျွန်တော် ခံစားနေရတာတွေ အခုလည်း ခံစားနေရဆဲ။ ဒါကို စာရေးဖုို့ခဲတံမရှိလို့၊ မှတ်တမ်း တင်ဖုို့ စာရွက်မရှိလို့ အဲဒါတွေကြောင့် မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဇနီးသည် ကျွန်တော့်အပေါ် နူးညံ့ သိမ်မွေ့စွာ၊ ကြင်နာစွာ အမြဲ ဆက်ဆံတတ်သူဆီက ဟောဒီထောင်ထဲကနေ အင်္ဂလန်ကို အသွားအပြန်လုပ်ရင်း ဆန့်ကျင်ဘက် နှုတ်ခမ်းများက သတင်းစကားတွေ ကြားခဲ့ရ တယ်။ ဆုံးရှုံးမှု ဒဏ်ရာတွေ ရိုက်ခတ်ထားလို့ နာကျင်နေတဲ့ စကားလုံးတွေ၊ ကျွန်တော့်ကို အပြင်က ချစ်ခင်စွာနဲ့ ရှိနေဆဲဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ကို သူက သယ်လာပေးတယ်။ ကျွန်တော့်ကို လူကိုယ်တိုင်မသိပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ အဖြစ်တွေကို ကြားသိပြီး သူတုို့ရဲ့ ဝမ်းနည်းမှုစကား လက်ဆောင်တွေ ပါးလိုက်ကြတယ်။ ၃ လတော့ ကုန်သွားခဲ့ပြီ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ နေ့စဉ်ဝတ္တရားတွေ၊ အလုပ်ချိန်ဇယားတွေက ကျွန်တော့်ရဲ့ အခန်းအပြင်တံခါးဝမှာ အမြဲချိတ်ထားတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အမည်၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပြစ်ဒဏ်၊ မေလတုန်းက ဒီလိုမှတ်တမ်းတွေနဲ့အတူ။
ဘုရားသခင် ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ အရာတွေ အားလုံးထဲမှာ တိုးတက်ကြီးပွားချမ်းသာ၊ အခွင့်အရေး၊ အောင်မြင်မှုဆိုတာတွေကို အသီး အပွင့်တွေ အသာလေး ခူးဆွတ်စားသုံးရသလို ဖြစ်ပေမယ့် ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းဆိုတဲ့ အရာကတော့ အလွန်ကို ထိခိုက်ခံစားရဆုံးပါပဲ။ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရခြင်းဆိုတဲ့အရာက တုန်ခါမှုပြင်းထန်လိုက်တာ ကမ္ဘာကြီးကိုတောင် လှုပ်ခတ်သွားစေလိုက်တာများ ဒီထက်ပြင်းထန်တဲ့ ခံစား ချက်မျိုးဆိုတာ မရှိနိုင်ပါဘူး။ ရွှေအဆင်းရှိတဲ့ သစ်ရွက်ပါးပါးလေးတစ်စ လွင့်ပါးသွားလိုက်တာ ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်ကိုလည်းလို့ သာမန်မျက်စိ နဲ့ မမြင်နိုင်သကဲ့သို့ ဝမ်းနည်းမှုဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းလေး ရွေ့လျားသွားမှုဟာ လိုက်လို့မမီနိုင်ပါလား။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတဲ့ လက်ကလေးနဲ့ ထိမိမှသာ သွေးစိမ်းရှင်ရှင် ထွက်ရလောက်အောင် ဒဏ်ရာတွေရလာလိုက်တာ သွေးတွေ ထပ်ခါထပ်ခါ ထွက်နေတာတောင်မှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မှာ နာကြင်မှုမရှိ။
ဝမ်းနည်းခြင်းဆိုတဲ့အရာရှိရင် အဲသည်မှာ မြင့်မြတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်။ အဲဒါကို သာမန်လူတွေ တခိျု့ပေါ့နားလည်ပါလိမ့် မယ်။ ဘဝဆိုတာ ဘာမှန်းမသိပေမယ့် သိတော့သိတယ်ဆိုတာလို သဘာဝတရားကို သိတယ်။ ဒါဆို နားလည်တယ်ဆိုတာလို ကျွန်တော့ကို ပုလိပ် ၂ ယောက် ခြံရံပြီး ဘတ်စ်ကာဘီ တရားရုံးကို ခေါ်သွားတုန်းကပေါ့။ ကြီးမားတဲ့ လူအုပ်ကြီးရှေ့ ဝရံတာမှာ စောင့်ဆိုင်းနေတုန်း အင်မတန် ချိုမြိန်ပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုက တိတ်ဆိတ်မှုထဲမှာ ဖြစ်ပျက်သွားတယ်။ သူက သူ့ဦးထုပ်အလေးအနက် ‘မ’ပြီး ကျွန်တော့်ကို ……လက်ထိတ်ခတ်ခံထားရတဲ့ကျွန်တော့်ကို…. ဦးခေါင်းငိုက်စိုက်နဲ့ ကျွန်တော့်ကို ….အရိုအသေပေးတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ကို ကျော်ဖြတ်လာခဲ့တယ်။ လူတွေဟာ ဒီထက် သေးမွှားတဲ့ အရာတွေအတွက် ကောင်းကင်ဘုံကို သွားနိုင်တယ်။ အဲဒီစိတ်၊ အဲဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတဲ့ အပြုအမူ။ ဒါဟာ ဘာနဲ့အလား သဏ္ဌာန်တူသလဲဆိုရင် သူဆင်းရဲရဲ့ ခြေအစုံကို သူတော်စင်တွေက ဒူးတုပ်ပြီး ဆေးကြောပေးသလို အနူတစ်ယောက်ရဲ့ ပါးပြင်ကို နမ်းသွားတဲ့ ရုတ်တရက်ပြုမူမှု၊ သူ ကျွန်တော့်ကို ပြုမူလိုက်တဲ့ အပြုအမူလေးကို ဘယ်လို စကားလုံးနဲ့မှ ဖော်ပြလို့မရနိုင်ဘူး။ အဲဒီအချိန်ပိုင်းလေးတုန်းမှာ သူရော ကျွန်တော်က သူ့ရဲ့ အပြုအမူလေးကို ဘယ်လောက်ခံစားသွား သလဲဆိုတာ သိပါ့မလား။ ဒါကို ဘယ်လိုစကားများနဲ့ ဖော်ပြရမလဲ။ စကားလုံးများနဲ့ ရောဖော်ပြလို့ ရနိုင်မှာမဟုတ်။ ဒါကို ကျွန်တော့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ အဖိုးတန်ရတနာတစ်ခုလို သိမ်းဆည်းခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် ဘယ်တော့မှ ပြန်မဆပ်နိုင်တော့မယ့်၊ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးယူထားလိုက်မိတဲ့လျိူ့ဝှက်သောအကြွေးအဖြစ်သိမ်းဆည်းထားတယ်။ မျက်ရည် စက်ပေါက်များစွာနဲ့ မွမ်းမံပေါင်းထည့်သွားပြီး တဖြည်းဖြည်း တန်ဖိုးကြီးမားလာမယ့် အဖိုးတန်ရတနာ။
ကျွန်တော့်အတွက် အသိပညာဆိုတာနဲ့ အကျိုးမပေးဘူးဆိုတဲ့ အချိန်ကျရင် အတွေးအခေါ်တွေ ပျက်သုဉ်း၊ စကားပုံတွေ၊ စာသားတွေ ကျွန်တော့် နှုတ်ဖျားမှာ ဖုန်တွေပြာတွေအဖြစ် ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျရင် ဟောဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ တိတ်ဆိတ်စွာ ပြသသွားတဲ့ ချစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာ ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ရင်မှာ ဖွင့်ဟလိုက်ပါစေ။ သဲကန္တာရထဲမှာ နှင်းဆီပန်းကလေး ပွင့်ဖူးလာသလို ဟောဒီ ခါးသည်းတစ်ကိုယ်တည်း အထီး ကျန် ဖြစ်ကာ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေ၊ ကျိုးပဲ့မှုတွေနဲ့ အဖော်လုပ်နေရတဲ့ ဒီကမ္ဘာထဲကနေ ဆွဲထုတ်ပေးလိုက်စမ်းပါ့။ လူတွေဟာ ဒီလူရဲ့ ပြုမူမှု လေးကို နားလည်နိုင်ရင်တောင်မှ ကျွန်တော့်အတွက် ဘာလို့ အဓိပ္ပာယ်ရှိသလဲဆိုတာကို သိပါ့မလား။ အမြဲတမ်းကို အဓိပ္ပာယ်ရှိသလဲဆိုတာကို သိပါ့မလား။ အမြဲတမ်းကို အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝနေတယ်ဆိုတာကို သူတုို့လည်း ဘာလို့ ဆိုတာကို နားလည်ချင် နားလည်လာလိမ့်မယ်။ ဘယ်လို စိတ်ခံစားမှုက ကျွန်တော့်ကို အုပ်မိုးလိုက်သလဲဆိုတာကို သိချင်သိလာမယ်။
ကမ္ဘာကြီးကိုပေးပို့လိုက်တဲ့ ဒီလိုလူသားတစ်ဦးရဲ့ ရင်တွင်းခံစားမှုများဟာ နွေဦးရာသီရဲ့ အဖူးအပွင့်တွေလို ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ စိတ်ဓာတ် ပြုပြင်ရေးစခန်းက အေးမြတဲ့ မြက်ခင်းလေးနဲ့ တူချင်တူမယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း လယ်ကွင်းထဲက လှပတဲ့ အဝါရောင် ပန်းကလေးတွေလို ‘’ဝမ်းနည်းပူဆွေးစရာကောင်းလှတဲ့ သံသရာ စက်ဝိုင်းထဲမှာ ပိုပြီးလေးလံသွားစေမယ့် အရာတော့ မဟုတ်ဘူး။ စိတ်ထိခိုက်ဖွယ် စက်ကွင်းထဲ မှာ ပိုပြီးဆိုးဝါးသွားအောင် ဖိစီးပေးမယ့်အရာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာ ဟိုးအဝေးကြီးကနေ သတင်းစကား သယ်ယူလာပေးတဲ့ တေးသီ ငှက် ကလေးရဲ့ နှုတ်က ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ စကားလုံးလေးတွေဖြစ်တယ်။ သို့သော်လည်း ဒါဟာ လေးနက်တဲ့ အနုပညာမြောက်တဲ့ အမှားမျိုးဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ်။ ဒီစာလုံးတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားပေမယ့် လွဲမှားစွာတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ လေထုလို့ဆိုချင်ဆိုမယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ခေတ်မီတဲ့ အနုပညာ မြောက် လေကောင်းလေသန့်လို့ ဆိုချင်ဆိုမယ်။ ခေတ်မီတဲ့ ဘဝဆိုတာဟာ ရှုပ်ထွေးပြီး အပြောင်းအလဲတွေများတယ်။ သို့သော်လည်း ခေတ်မီ တဲ့ ကမ္ဘာထဲမှာ ဂီတအနုပညာသမား၊ ပန်းပုအနုပညာသည်တွေလို သူတုို့ထုဆစ်ဖွဲ့နွဲ့လိုက်တဲ့ အနုပညာဟာ အများကို ဖော်ပြခြင်းဆိုတဲ့ အနု ပညာမျိုးလို့ဆိုရင် စာပေဟာလည်း ကိုယ့်ခံစားချက်များ၊ ရင်တွင်းရိုက်ခတ်မှုများကို စကားလုံးများနှင့် ဖော်ပြလိုက်တာပါပဲလို့’’
De Profoundis ‘from the depths’(အကျဉ်းထောင်ထဲက ရေးတဲ့စာများ) စာစုမှ ဘာသာပြန်သည်။’
(ရနံ့သစ်၊ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ။)
- See more at: http://moemaka.com/archives/39738#sthash.nrZbxNZh.dpuf
Posted by Junior Win at 9:59 PM No comments:
လွဲမှားခဲ့သော အနာဂတ်တွက်ကိန်းများ – ဂျူနီယာဝင်း
(မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေဖြစ်လာတာကတော့ယနေ့မျက်မြင်ပါပဲ။နောင်အနာဂတ်မှာ နောင်တစ်နေ့နေ့မှာ မဖြစ်နိုင် ဆိုပြီးပြောတာတွေကိုအနာဂတ်လူသားတွေက ယနေ့ခေတ်လူတွေကိုအခုလိုပဲ ထောက်ပြကြဦးမယ် ထင်ပါရဲ့)
“to err is human” တဲ့။ လူဆိုတာ မှားမှာပဲဟု ဆိုပါသည်။ အမှားနှင့်ကင်းသူဟူ၍ မရှိနိုင်။ အနာဂတ်မှာ ဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ မဖြစ်နိုင်ဆိုတာမျိုးကျတော့ ပို၍ပင်မှားနိုင်ပေတော့သည်။
IBM ကို တွေ့ရှိခဲ့သူ Thomas Watson က ၁၉၄၃ ခုနှစ်မှာ အခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။ ‘ကျွန်တော့်အထင် ပြောရရင်တော့ ကမ္ဘာပေါ် မှာ ကွန်ပျူတာတောင်းဆိုမှုဟာ စက်ငါးလုံးထက် မကျော်နိုင်ပါဘူး’။ ဒါပေမဲ့ ယနေ့ IBMကွန်ပျူတာခေတ်က ရာဂဏန်းနဲ့ စကားပြောနေပါ ပြီ။ ၁၈၇၇ ခုနှစ်နဲ့ ၁၈၈၁ ခုနှစ်ကြားမှာ အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်ခဲ့သူ RutherfordBirchard Hayes က ၁၈၇၆ ခုနှစ်မှာ တယ်လီဖုန်းတွေ နဲ့ ပတ်သက်လို့ အခုလိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ ‘ဒီတီထွင်မှုဟာ အံ့သြစရာ ကောင်းလှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့ကျရင်တော့ ဘယ်သူမှ သုံးကြမှာမဟုတ်ပါဘူး’ ဒါပေမဲ့ ယနေ့ခေတ် တယ်လီဖုန်း အသုံးဝင်မှုကို လူတိုင်းမြင်တွေ့နေကြရပါပြီ။ တယ်လီဖုန်းမှ အိမ်တွင်းသုံးတွေ၊ သယ်ဆောင်လို့ရတဲ့ တယ်လီဖုန်းတွေ၊ အရောင်အသွေးစုံ၊ ပုံသဏ္ဌာန်မျိုးစုံဟာ လောက်တောင် မလောက်ပါဘူး။
Auguste Compte ဟာ ပြင်သစ်လူမျိုး စိတ်ပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူရေးသားခဲ့တဲ့ စိတ်ပညာဘာသာဗေဒကို ယနေ့ Herman တက္ကသိုလ်မှာ သင်ကြားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ သူက ၁၈၃၅ ခုနှစ်မှာ ကြယ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ‘Nous concevons la possibilité de …………’ ‘ကျွန်တော်တို့က သူတို့ရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်တွေ၊ အကွာအဝေးတွေ၊ သူတို့ရဲ့ ဟန်ပန်တွေ၊ လှုပ်ရှားမှုတွေကို စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းမှုတွေ၊ သူတို့ရဲ့ မြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ အသွင်သဏ္ဌာန်တွေ ကို လေ့လာမှုကို လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး’တဲ့။ ၁၈၅၉ ခုနှစ်မှာ စပက်ထရိုစကုပ် (Spectoscope) ခေါ် ရောင်စဉ်ကြည့် ကိရိယာပေါ်လာ ပါတယ်။ အဲဒီကိရိယာနဲ့ ကြယ်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုတွေ၊ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အသွင်သဏ္ဌာန်တွေကို လေ့လာခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော် သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး Albert Einstein ဟာ နျူကလိယစွမ်းအင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၁၉၃၂ ခုနှစ်မှာ သူ့ရဲ့ ယူဆချက်ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ ‘နျူကလိယစွမ်းအင် တစ်နေ့မှာ ပိုင်ဆိုင်လာမယ်ဆိုတာဟာ တော်တော် မဖြစ်နိုင်ဆုံး၊ အသေးနုတ်ဆုံး အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အက်တမ်ကို ခွဲမှသာ ရနိုင်မယ့် နျူကလိယကို မရနိုင်ပါဘူး။ အက်တမ်ကို ခွဲနိုင်မယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး’ အိုင်စတိုင်းဟာ ၁၉၃၉ ခုနှစ်မှာ တော့ သူ့အမြင်ကို ပြောင်းခဲ့တဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ ရူပဗေဒပညာရှင်တွေက အဏုမြူဗုံး ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ပါဝင်တဲ့ စာတစ်စောင်ကို သမ္မတ Roosevelt ဆီပေးပို့ရာမှာ သူက လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက အဲဒီ ထုတ်လုပ်မှုမှာ မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၄၃ ခုနှစ်မှာ သမ္မထံ ဒီလက်နက်ကို အသုံးမပြုဖို့ စာရေးတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၄၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့မှာ အမေရိကန်က ပစ်လွှတ်ခဲ့တဲ့ အဏုမြူဗုံးဟာ ဟီရိုရှိးမားကို ကျခဲ့ပါတယ်။ စစ်အပြီးမှာ အိုင်စတိုင်းဟာ နျူကလိယ အဏုမြူဗုံးလုပ်ငန်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။
Lee De Forest က အမေရိကန် အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၅၇ ခုနှစ်မှာ လကမ္ဘာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလို ဆိုခဲ့ပါ တယ်။‘Mettre un homme dans une fuseaplusieurse tages et……’’ ‘လူတစ်ယောက်ကို ဒုံးပျံထဲမှာ ထည့်ပြီး လကမ္ဘာရှိရာ သွားမယ်၊ ပြီးတော့ ကမ္ဘာမြေကို ပြန်လာမယ် ဆိုတာဟာ (ဲJules Vernes) ဂျူးဗန်းရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်မျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။’ သို့ပေမယ့် သူပြောခဲ့ပြီး ၁၂ နှစ်အကြာမှာ လူသားဟာ ပထမဦးဆုံး လကမ္ဘာမြေပေါ် ခြေချနင်းခဲ့ပါတယ်။
Auguste Lumiereဟာ ၁၈၉၅ ခုနှစ်မှာ သူ့ရဲ့အစ်ကို အကူအညီနဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်စက်ကို တီထွင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက အဲဒီ နှစ်တုန်းကပဲ အခုလို ပြောခဲ့ပါတယ်။ ‘ကျွန်တော့်ရဲ့ တီထွင်မှုဟာ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအတွင်းမှာသာ စူးစမ်းစရာ သိပ္ပံပညာရပ်တစ်ခုလိုပဲ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ စီးပွားရေးအရတော့ ဘယ်လိုလမှ အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ဘူး’ လို့ ဆိုပါတယ်။ ၁၉၂ဝ ခုနှစ်မှာတောင် သူက အခုလို တွက်ကန်းထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ‘ရုပ်ရှင်တွေဟာ တော်တော် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာတော့ ရေရှည်မရပ်တည် နိုင်ပါဘူး။ အသံနဲ့ရုပ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုဆိုတာ လုံးဝဥဿုံ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။’ အခုလက်ရှိဘဝမှာ ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ တိုးတက်မှုဟာ လိုက်လို့ တောင် မမီနိုင်တော့ပါဘူး။
လေထဲမှာ လူတွေ မသွားနိုင်ဖူးလို့ (Academy of Science)အဖွဲ့ဝင်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် (Jpseph de Lanlandeက ၁၇၈၂ ခုနှစ် မှာ အခုလိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ ‘Il est totalement impossible que……….’’ ‘လူတွေ လေထဲပျံနိုင်မယ်ဆိုတာ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ တွက်ချက်မှုနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ တောင်ပံတွေရှိဖို့လိုပါတယ်။ တစ်စက္ကန့်ကို တစ်မီတာနှုန်းရှိတဲ့ အမြင့်နှုန်းနဲ့ လှုပ်ရှား နိုင်ရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို တွေးခေါ်တာဟာ ရူးသွပ်မှုသာ ဖြစ်ပါတယ်’ သူပြောပြီး ၁၃ လ အကြာမှာ Montgofierညီအစ်ကိုတွေဟာ ပထမဦးဆုံး မိုးပျံပူဖောင်းနဲ့ ပျံသန်းမှုဟာ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၇၉၃ ခုနှစ်နဲ့ ၁၈၅၉ ခုနှစ်ကြား လန်ဒန်တက္ကသိုလ်မှ နက္ခဗေဒပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Dyonysus Landner က အခုလို ဆိုပါ တယ်။
‘မီးရထားနဲ့ အမြန်ဆုံးခရီးတွင် နိုင်မယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ခရီးသည်တွေဟာ အသက်ရှုကျပ်ပြီး သေသွားနိုင်ပါတယ်’တဲ့။ ၁၈၅၃ ခုနှစ်မှာ အင်္ဂလန်က (The Quarterly Review) သတင်းစာက အခုလို ရေးခဲ့ပါတယ်။
‘မီးရထားတွေဟာ မော်တော်ယာဉ်တွေ အားလုံးထက် နှစ်ဆလောက် မြန်ပြီး ကျော်တက်သွားမယ်ဆိုတာဟာ ရူးသွပ်တဲ့ စဉ်းစားတွေး ခေါ်မှုသာ ဖြစ်ပါတယ်’။ ယနေ့ မီးရထားတွေရဲ့ ရပ်တည်မှုဟာ သူတို့နိုင်ငံတွေမှာ တစ်နာရီကို မိုင်ရာဂဏန်း ဖြစ်နေကြပါပြီ။
မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ သူတို့က ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ ပြောတဲ့သူတွေကလည်း သာမန်လူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့် ဧရာမ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေ ဖြစ်လာတာကတော့ ယနေ့ မျက်မြင်ပါပဲ။ နောင်အနာဂတ်မှာ နောင်တစ်နေ့နေ့မှာ… မဖြစ်နိုင် ဆိုပြီး ပြောတာတွေကို အနာဂတ်လူသားတွေက ယနေ့ခေတ်လူတွေကို အခုလိုပဲ ထောက်ပြကြဦးမယ် ထင်ပါရဲ့။
(အမှတ် ၁၆၅၊ ၂ဝဝ၄၊ ဇန်နဝါရီ အတွေးအမြင်)
Posted by Junior Win at 9:54 PM No comments:
တယ်လီဖုန်းတီထွင်သူ ဘယ်သူလဲ ဂျူနီယာဝင်း
Days and Flowers of Myanmar